SomaliTalk.com » Garaad C/qani G.Jamac iyo Col. Bashiir Jamac (Baydan) Laba marxuum oo la tabey
Garaad C/qani G.Jamac iyo Col. Bashiir Jamac (Baydan) Laba marxuum oo la tabey
marka shayga siyaasada la yidhaahdo oo macnaheedu yahay qaabka Hogaaminta ,Qaran ,Gobol ,Degmo ,beel iwm
Hadii marka ay hagaagsantahay siyaasada Hogaamiyaha ,waxaa dhacaysa umadaas ,ama qaran ha ahaato ama Gobol ama degmo ama Beel iwm .
in ay gaadhayso horumar ama dhibaatooyin badan oo soo wajaha xilliga colaada ,abaarta iwm ay si sahlan uga badbaado.
Waxaan filayaa ma jiro Hogaamiye 100% siyaasadiisu najax tahay ,marka laga reebo rushii iyo anbiyadii ilaah soo diray ee iyaga uu hagayey waxyiga samaawiga ah.
waxaa ku xigta cidii wax hogaamisay ee raacday dariiqooda.
laakiin hogaamiyayaasha ka soo hadhaa hogaamintoodu ma noqon karto 100%
laakiin mid bay noqon kartaa 60% mid bay noqon kartaa 50% ,..ilaa …….0%.
Umaada hogaankeedu ku dhaco wax ka yar 50% ,waxay udhow dahay in ay baabado ama ay ku dhacdo dhibaato fara badan ama qaran ha ahaato,ama gobol ama degmo ,ama beel.
Hogaamiyuhu waa in leeyahay karti xili walaba garan karana ,xili walaba habka ku haboon ee loo xalin karo dhibka markaa jira.
xiliyada ugu daran ee uu soo baxaana hogaamiyahaasu waxa uu yahay,waa xiliga colaada ,abaarta,khilaaf baahsan oo ku yimaada bulshada uu markaa Hogaamiyo ama isaga laga horyimaado tabashaba ha jirtee.
hadaba waxaynu qormadan ku eegaynaa laba hogaamiye kamid ahaa dadka ku dhaqan Gobalda hada loo bixiyey SSC siyaasadii ay ku dhaqmi jireen xili duruufo colaado abaaro iyo dhibaatooyinba ay soo wajaheen dhamaan somaaliya oo ay ku jirto mandaqada ay udhasheen.
1.Garaad c/qani wuxuu ahaa oo lagu sifayn karaa Garaadkii Nabada xilliga colaada iyo xilliga Nabadaba wuxuuna jeclaa wax kasta uu tabanayo ama bedel u baahan in wado siyaasadeed loo maro. wuxuu jeclaa dadkiisa in ay nabad ku wada noolaadaan ,dadka ay deriska la yihiina nabad ku noolaadaan wixii xuquuq la kala tabanayana wada hadal iyo wada wanaagsan loo maro ,wixii uu arko in ayna sharaf u ahayn isaga iyo dadka uu matalana wuxuu nin aan qaadan.
waxaan xusi karnaa nabadii danood ee hirgashay ee uu hogaanka ka ahaa taas oo ay mudo badan is laynayeen beelaha waqooyiga wada dega oo qaar SNM ahaayeen qaarna ka soo horjeedeen oo ay taageersanaayeen dawldii markaa jirtey.
waxaan soo qaadi karnaa markii dawladii dhaxe burburtay ,isagoo lasanod jooga hawshii uu halkaa ka qabtay ee ahayd isagoo duulaan uu ku soo wajahan yahay lasanod in uu isagu la hadlay oo iyidhi lasanod aniga ayaa gacanta ku haya ,aan kawada hadalo wixii inoo dana labadeenaba.
waxaa dhacday garaadku inuu tegay burco,ka dibna hargaysa,maamulkii halkaa lagu soo dhidsay markuu arkay in dadka uu matelo aanay cuntamin ,wuxuu xilligaa si cad ugu sheegay c/raxaan maxamud cali(TUUR) in aan qaadanayn qaybtaa beeshiisa u cuntamin.
waxaa lagu xusuustaa qaybtii uu ku lahaa Ethoipia inuu la hadlo tuso usheego degaanka SSC wixii dhiba ee ay ka tirsanayso inuu masuul ka yahay kala soo xidhiidho,waxaanan xusi karnaa shirirkii uu wardheer kula qaatay taas oo ujeedadu ahayd in aan Ethopia oo dawlada iyo shacabka SSC isku dhicin.
waxaan xusi karnaa qaybtii siyaasdeed ee uu ku lahaa dhisada maamulka p/land.
isagoo taa macnaheedu ahaa haday is fahmi waayeen somali land in uu helo maamul la mid ah oo uu kaga maarmo.
waxaan xusi karnaa xiligii ay is fahmi waayeen maamulka p/land ,in aanu dhibaato samayn laakiin uu doonayey in la helo dawlad somaaliyeed oo uu maamulada kaga maarmo,markastana hadafkiisa wuxuu umarayey waji siyaasadeed caqli ku salaysan.
Garaad C/QANI ilaah janadii ha ka waraabiyo waxaan ku sifayn karaa inuu ahaa
Garaadkii Nabada …Garaadkii aqoonta………..
2-Col.bashiir jama (Beydan) wuxuu ahaa sariikiishii dawladii dhaxe ee somaliya ,markii ay burburtay dawladii ,dhamaan hubkii uu gacanta ku hayey iyo ciidankiisii oo ka koobnaa somali oo dhan wuxuu keenay magaalada buuhoodle,taas oo degaanka u noqotay awood dheeriya oo lagaga gabado cidii dhibaato la maagan.
Bashiir al ha unaxariisto ma ahayn askari keliya wuxuu ahaa nin ku fiican hogaaminta dadka uu dhex joogo ,wuxuu aad yaqaanay dabaysha siyaasadeed meesha ay socoto iyo meesha ay ka imnayso,isagoo aminsanaa in gacan qoriga lagu hayso ,gacana siyaasada lagu maamulo,wuxuuna mar walba isku dayi jirey in aanay wax gacan ka hadal ah dhex marin derisyada sida s/land ..EThopia hadii aanay kalifin,sabab taas oo u diidanaa in aan culays ka xoog weyni soo fuulin dadka shacabka ah ee degaanka.
taasna waxay ahayd awoodiisa ciidan iyo kartidiisa siyaasadeed mid ay ku qiimeyaan ,ETHOPIA ,SLAND IYO P/LAND.
inta badana ETHOPIA wuxuu tusayey in uu isagu masuul ka yahay Buuhoodle iyo degaanka ku xeeran markasta oo ay wax tabtaana ay la soo xidhiidhaan ,ciidana aanay keenin,taas oo ula jeeday in uu dadkiisa iyo kala badabaadiyo ciidan dawladeed oo ka xoog weyn.
waxaan filayaa maanta in ay dhacday wixii bashiir hortaagnaa ,dhimasho ,barakac .
Col. Bashiir jamac (baydan) waxaan ku sifayn karaa inuu ahaaa , Geesi xilliga dagaalka ,Nabadoon xili walba ,Siyaasi Xilliga siyaasada.
3. XAALKA MAANTA
waxaan u daynayaa ,qurub joogta Jibaysan ,ee ubadan dumarka iyo dhalinyarada,ee caruurtoodii iskuulada wanaagsan iyo meelaha nabada joogaan ee qaxinya caruurta nabada uun haysatay ee aan wax kale haysan, aanay awood difaac iyo mid siyaasadeed toona uahayn…
4.Talo ku socota wax Garadka Buuhoodle
Arinta dhibka yaala ilaahay ha fududeeyo,ha idinka kor qaado,intaa ka dib maanta waxaad ubaahantihiin,taladii QORWAA.TALADII SII ARAG CABDULLE
Mataan Cumar (BUDHYAR)
1 Jawaab " Garaad C/qani G.Jamac iyo Col. Bashiir Jamac (Baydan) Laba marxuum oo la tabey "
Abdalla haji gedi (mr..gedi) says:
Thursday, May 27, 2010 at 3:28 am
Ad iyo aad ayan kugu mahad cilanaya walalkey somaliyedow madaama aad dib noo xasuusisay muwadininti loo baahna in taarikhdoda laga qora boogaag, lkn nasib daro aynu ka gabinay. Teda kale waxan kugula talinaya walal inad si wado so bandhigista tarikhda geesiyaasha,muwadininta, iyo dadki dowlidnimo doonka aha e soo maraya umadeen somaliyed